U-Uber ususebenzisane noBBM ukwethula uhlelo olusha lwamakhasimende – LIVE Express
I-Creative Media Works, nesebenza njengenkundla yezokuxhumana edumile i-BBM Messenger, isihlangane nesikhondlakhondla senkampani yamatekisi akhokhelwa ngebanga i-Uber ngenhloso yokuba kwethulwe uhlelo lwe-Uber ride-on-demand kwi-BBM Messenger.
Lolu hlelo kuthiwa luzotholakala emazweni ahlukene emhlabeni okubalwa kuwo i-Indonesia, nokuyizwe lapho bebaningi abantu abasebenzisa u-BBM; bese kuba yise-Africa, ise-Asia, ise-Europe, ise-North America kanye nase-Middle East.
FUNDA NALOLU DABA: ISEXWAYISO: Kuthiwa sebephelile abama-Uber nama-metered taxi KwaMashu
Lokhu kusho ukuthi abantu abasebenzisa iBBM Messenger sebezokwazi ukuthi bazibhukhele i-Uber besebenzisa i-icon ye-Uber kwi-BBM Discover menu ngaphandle kokuthi kuze kudingeke ukuba babe ne-app eseceleni ye-Uber efonini yabo.
Oyi-General Manager ye-South East Asia Uber uChan Park uthi izigidi zabantu abasebenzisa iBBM Messenger emhlabeni wonke sezizokwazi ukubhuka i-Uber kalula nangokushesha zisebenzisa lolu hlelo.